Cosmetic Box - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Cosmetic Box)
Nkwakọ ngwaahịa ọkpọkọ ihe ndozi akpukpo ozu Mpempe akwụkwọ ịchọ mma, ogo dị elu ma dị mma maka ịkwakọ ihe ịchọ mma. Igbe ịgba gburugburu, nkwakọ ngwaahịa pụrụ iche nwere ọmarịcha ihe pụrụ iche. Igbe ịchọ mma, enweghị ụdị ọ bụla. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa n'ihu ma chọta Li yang Printing, Anyị...
Ejiri Mpempe Akwụkwọ Mwube Ejiji na Ngosiputa Ejiji na Lid
Ejiri Mpempe Akwụkwọ Mwube Ejiji na Ngosiputa Ejiji na Lid Mpempe akwụkwọ Igbe ịchọ mma, omenala emere igbe ịchọ mma, na-ebipụta igbe ịchọ mma. Igbe ịchọ mma, ihe eji achọ mma, na njiri mara mma. Imewe ihe eji achọ mma, igbe kaadiboodu nke nwere mkpuchi maka icho
Igbe akwụkwọ ịchọ mma nke nwere windo PVC
Igbe akwụkwọ ịchọ mma nke nwere windo PVC Igbe onyinye ịchọ mma, igbe ịchọ mma, akwụkwọ na akwụkwọ dị elu. Igbe ịchọ mma, igbe maka ndozi ihe ịchọ mma dịka onyinye. Igbe nwere PVC, igbe dị ọnụ ala nke nwere windo PVC, ile anya mara mma ma dị mfe iburu, nwere ike ijide anya ndị ahịa gị. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ...
Igbe dị ụtọ mpempe akwụkwọ na-esi ísì ụtọ igbe
Inye Ike: 3000000 per month
Igbe dị ụtọ mpempe akwụkwọ na-esi ísì ụtọ igbe Mpempe akwụkwọ na-esi ísì ụtọ akwụkwọ, na mbipụta dị elu, CMYK ma ọ bụ agba pantone bụ maka nhọrọ gị Igbe kaadiboodu siri ike ga-echebe iko karama Igbe nkwakọ ngwaahịa ezumike dị ụtọ, ọ bụghị ụdị. Liyang Paper ngwaahịa co., Ltd bụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa dị na...
Ihe ịchọ mma eji achọ mma onyinye igbe
Ihe ịchọ mma eji achọ mma onyinye igbe Gaa na igbe dị n'okpuru, ọnụahịa dị ọnụ ala na ezigbo mma, bụrụ ezigbo nhọrọ gị oge niile. Igbe onyinye ji achọ mma, igbe onyinye maka nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma, ọmarịcha ma dị mma. Mpempe akwụkwọ ịchọ mma nke igbe, igbe ịchọ mma nwere windo, nwere ike igosi otu akụkụ nke...
Akpo mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-achọ mma
Akpo mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-achọ mma Otu igbe ịchọ mma, igbe ịchọ mma nwere osisi e biri ebi, juputara n’ọrụ ụlọ ọrụ gị. Customchọ mma igbe ịchọ mma, nha omenala na imewe ya na akwa ndozi, klas dị elu mana ọnụahịa dị ala. Mpempe akwụkwọ ịchọ mma, igbe dị n'okpuru, ọnụahịa dị ọnụ ala na ezigbo mma. Chọrọ...
igbe onyinye onyinye
igbe onyinye onyinye Igbe nkwakọ ngwaahịa onwe onye , mbipụta akwụkwọ ikike cucstom dị elu maka nkwakọ ngwaahịa onwe onye. igbe nlekọta nke onwe gị dị mpempe igbe nwere mpempe akwụkwọ akara ụlọ ọrụ nke gị maka nkwakọ ngwaahịa onyinye onwe onye Jiri obiọma mara na ngwaahịa anyị niile bụ nke emebere, yabụ gbazie gị ka...
Igbe eji achọ mma ịchọ mma nwere windo doro anya
Igbe eji achọ mma ịchọ mma nwere windo doro anya Igbe a na-ahụ maka mma, igbe akpachi ejiri akara eji ebipụta, ịdị mma dị elu. Igbe ịchọ mma nwere windo, igbe nkwakọ ngwaahịa, na windo PVC, nwere ike igosi ngwaahịa gị nke ọma. Igbe ngwugwu ịchọ mma, igbe mpempe akwụkwọ akpịrị ịchọ mma, ọnụahịa dị ala na ezigbo ọkwa....
Igbe onyinye ịchọ mma na-acha ọcha mkpuchi mma
Igbe onyinye ịchọ mma na-acha ọcha mkpuchi mma Igbe ịchọ mma, igbe ịchọ mma n’enweghị akwụkwọ ọ bụla, dị mfe ma mara mma . Akwukwo dikwa ocha, igbe onyinye d ị maka ngwunye eji acho ihe, kaadiboodu di elu . Igbe onyinye igbe nri, igbe ngwugwu onyinye, igbe erimeri na eji aka, ihe puru iche . Chọrọ ngwaahịa dị mma dị...
Igbe nkwanye akpukpo ahu puru iche eji mkpuchi
Igbe nkwanye akpukpo ahu puru iche eji mkpuchi Kaadiboodu akpukpo oku, akpukpo ahiri akpukpo ahiri nwere mkpuchi . Igbe ịchọ mma pụrụ iche, mpempe akwụkwọ pụrụ iche nwere akara e biri ebi na agba akwụkwọ na-ese akwụkwọ, ụdị dị elu ma maa mma. Igbe ịchọ mma na Fanye, igbe onyinye onyinye ịchọ mma na ntinye ụfụfụ ....
Igbe mpempe akwụkwọ na-achọ mma ịchọ mma na akara ngosi
Igbe mpempe akwụkwọ na-achọ mma ịchọ mma na akara ngosi Igbe onyinye ịchọ mma, igbe onyinye ntecha, dị ọnụ ala ma dị elu . Igbe nkwakọ ngwaahịa akpụkpọ anụ, nkwakọ ngwaahịa ngwaahịa nlekọta anụ ahụ, nke ejiri akara e biri ebi juputara na njirimara gị. Igbe nkwakọ ngwaahịa dị ọnụ ala, aha akara dị mfe ma ebipụta ....
Igbe onyinye pụrụ iche drọwa igbe ịchọ mma
Igbe onyinye pụrụ iche drọwa igbe ịchọ mma Igbe ịchọ mma draya igbe, igbe ịchọ mma na ntinye, akwa . Igbe onyinye drọwa, akwụkwọ pụrụ iche, ọla edo na ọla ọcha, nke na-enwu na ejiji. Igbe ịchọ mma drọwa, igbe nkwakọ ngwaahịa onyinye mma, ọwụwa anyanwụ imeghe na imewe pụrụ iche . Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa,...
Igbe ịchọ mma ịchọ mma igbe igbe
Igbe ịchọ mma ịchọ mma igbe igbe Igbe onyinye ntecha, ihe mkpuchi akpukpo onyinye, igbe onyinye igbe . Igbe onyinye ọla na igbe, igbe ịchọ mma na silk, akara ngosi ederede ahaziri iche. Igbe akwa ngwaahịa, ngwaahịa dị elu maka nkwakọ ngwaahịa, ọnụahịa dị ala na ejiji . Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa...
Otu ibe ihe onyinye akpukpo di nkpa
Otu ibe ihe onyinye akpukpo di nkpa Otu igbe ihe ịchọ mma, igbe ịchọ mma onyinye eji ebipụta akara. Igbe ịchọ mma dị ala, igbe ịchọ mma, ọnụahịa dị ọnụ ala na ezigbo mma. Nkwakọ ngwaahịa igbe ịchọ mma, nke ahaziri iche na imewe ya na ndozi mara mma, na-ele anya ejiji. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa...
Igbe nkwanye ugwu dị ọnụ ala na akara ngosi
Igbe nkwanye ugwu dị ọnụ ala na akara ngosi Igbe mpempe akwụkwọ dị ọnụ ala, igbe nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma wth glossy lamination. Igbe ịchọ mma, igbe vosmetic onyinye, ọnụahịa dị elu na ọnụahịa dị ala. Nkwakọ ngwaahịa igbe, igbe ịchọ mma na njiri mara, ogo na imewe ahaziri juputara na njiri mara gị. Chọrọ ngwaahịa dị...
Igbe kaadi ọkpọkụ siri ike na tray
Igbe kaadi ọkpọkụ siri ike na tray Igbe kaadiboodu nku anya, akwukwo okpokoro akpukpo ahiri aru nke ichikota ntutu igbe kaadiboodu maka ikwa mkpuchi ntutu , igbe kaadiboodu siri ike na mbipụta oyuyo gi nke ichoro ntutu igbe zuru ezu epeepe nkuchi ntutu na tray maka nkwakọ ntutu nke ugha Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke...
Gburugburu mpempe akwụkwọ mmanụ na-esi ísì ụtọ igbe onyinye
Gburugburu mpempe akwụkwọ mmanụ na-esi ísì ụtọ igbe onyinye igbe mpempe akwụkwọ na-esi ísì ụtọ , na-ebi akwụkwọ dị elu, CMYK ma ọ bụ agba pantone bụ maka nhọrọ gị Igbe dị ụtọ gburugburu igbe igbe siri ike ga-echebe iko karama ahụ Akwukwo onyinye ndi mmadu na - ewu ewu maka onyinye akpukpo oku ichere maka ngwugwu isi...
Igbe onyinye eji achọ mma mma nwere akara ejiri ebipụta
Igbe onyinye eji achọ mma mma nwere akara ejiri ebipụta Igbe ịchọ mma e biri ebi, ihe eji achọ mma mkpuchi igbe.high quality, anya okomoko. Onyinye eji acho mma, akpukpo onyinye nke ihe eji acho mma, eji akara edeputa ya. Nkwakọ ngwaahịa igbe ịchọ mma, ezigbo ihe mmụta dị ala na ọnụahịa dị ala, nhọrọ gị dị mma. Liyang...
Igbe onyinye ịchọ mma dị ọnụ ala na akara ngosi
Igbe onyinye ịchọ mma dị ọnụ ala na akara ngosi Igbe ịchọ mma, ọnụ ala mpempe akwụkwọ nwere akara ngosi ọla edo, okomoko na ejiji . Igbe onyinye eji achọ mma, igbe onyinye, igbe ngwaahịa, mma. Mpempe akwụkwọ ịchọ mma, igbe onyinye onyinye, ala ọnụahịa na ọkwa dị mma . Liyang Paper ngwaahịa co., Ltd bụ ụlọ ọrụ na ụlọ...
Nkwakọ onyinye igbe kaadiboodu na rịbọn
Nkwakọ onyinye igbe kaadiboodu na rịbọn Igbe onyinye, igbe nkwakọ ngwaahịa, ihe di elu na ọnụahịa dị ala . Igbe onyinye na rịbọn, igbe onyinye, rịbọn na-ejide ndị mmadụ mgbe niile. Igbe ngwongwo ngwongwo, nke ahaziri iche na imewe ya, jide n'aka na ị ga-amasị ha . Liyang Paper ngwaahịa co., Ltd bụ ụlọ ọrụ na ụlọ...
Akpaaka Mpempe Akwụkwọ Ejiri aka na Ntanetị Ihu
Akwụkwọ Akwụkwọ Kraft Akwụkwọ Edemede Ahụ
Office ahaziri softcover notebook na elastic
Kalịnda Akwụkwọ Iwepụta Ihe Okomoko na Button nso
Igbe Drawer Slide ọla na Piam maka mgbanaka
Nkwakọ ngwaahịa okomoko Matteu akpa obere akpa
Akwụkwọ edemede ọkachamara ma ọ bụ akwụkwọ ndetu azụmaahịa